ဇက်ဗီလင်းတန်း: February 2012
Liandingpuii & Hluteii-Gospel Music Collection
01-Kan fak zel dawn(Hluteii)
04-A hmelmawi min hmuhtir tu(Liandingpuii)
05-Chuai theilo hmangaihna(Hluteii)
06-I chatuan hmun tur khawiah nge(Liandingpuii)
07-Thisen thil tihtheihna(Hluteii)
09-Eden thar nuamah(Hluteii)
10-Theresacrown for me
Mizoram Music Videos အဖွဲ့ သီချင်း
Posted by ZP.LINTAN at 11:38 AM
Posted by ZP.LINTAN at 9:27 AM
01-ဒေါသစိတ်ကလေး ၃၆၀ မိနစ်
11-အချိန်က ၂၄ နာရီ
၁။အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီး နှစ်ခုက တံတိုင်းလိုခြား
တနေ့တော့ ဝေးရမယ့် ဒီလမ်းဆုံမှာ
တကယ်ဆို ရင်ထဲအမြဲ မင်းပဲရှိနေဦးမှာ
ဒီလိုဆုံနိုင်ခွင့်လေး ခဏ သေပျော်ပြီရင်နင့်သွား
ဒီသီချင်းလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဂီတာအိုလေး ကောက်ကိုင်မိတဲ့ အခါ အလွယ်တကူ ဆိုလို့ရအောင် စာသားလေးလည်း တင်ထားပါတယ်။
Posted by ZP.LINTAN at 12:09 PM
03-သီတာ သီတာ သီတာ-R.ဇာနည်
Posted by ZP.LINTAN at 12:29 PM
အဖွဲ့ သီချင်း စောဘွဲ့မှူး
ကိုယ် Computer ရဲ Start ဘားလေးကို ကိုယ်လိုခြင်တဲ့ နေရာမှာတားရအောင် အပေါကပုံကိုမြင်
မယ်လိုထင်တယ် အဲဒါကအောက်နော် ပြီးတော့ အပေါ ဘေးပြောင်ခြင်ရင်တော့ Desktop မှာ Right
Click လိုက်ပြီးရင်တော့ Personalize ကိုသွားပါ ပြီးတော့ အောက်ကပုံမှာမြင်တဲ့ အတိုင်း Task bar
and Start Menu ကိုသွားပါ။
Posted by ZP.LINTAN at 12:14 PM
Posted by ZP.LINTAN at 5:01 AM
05-အရှုံး ပြီးတော့ အရှုံး
10-မင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်း
Posted by ZP.LINTAN at 12:53 AM
03-မိတော့ မိတယ် (အနဂ္ဂ+ယုဇန)
06-ဘူးသီး ခရမ်းသီ (တွယ်တာ)
07-ဖုန်းဆက်တာ ဘယ်သူလဲ (ရတနာဦး)
08-သူ့အချစ်ဟာ ဖရဲသီး (မေခလာ)
09-စတော်ဘယ်ရီ ချစ်သဲရှင် (ဂရေဟမ်+တင်ဇာမော်)
10-ပန်းသီး ဖီလင် (အယ်ခွန်းရီ)
11-မျက်ဝန်းထဲမှာ အဖြေရှာ (ရွှေထိုက်)
13-အားလုံးက ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး (ချိုပြုံး)
ချိုပြုံး စုံတွဲသီချင်း အဖွဲ့ သီချင်း
08-ရည်းစား မဟုတ် ဘာမဟုတ်
11-ကမ္ဘာ ကမ္ဘာ အဝေး
Posted by ZP.LINTAN at 12:40 AM
Posted by ZP.LINTAN at 11:59 PM
01-အကြင်နာ နည်းလှ လွန်းသူရေ
12-အချစ်ကို မရရင် ရူးမယ်
Posted by ZP.LINTAN at 9:16 PM
သီချင်းအသစ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် နားဆင်ဖူးတဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှာဖွယ်စုစည်းထား ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကတော့ http://www.myanmarmusic.homeip.net/music_vcds/Kabyar/index.htmlမှဆွဲလာတာပါ။အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by ZP.LINTAN at 5:08 AM
ရိပ်တော့ ရိပ်မိမယ် ငါထင်တယ်....
ဒီဘ၀မှာပဲ အတိတ်က ၀ဋ်ကြွေးတွေကြေပါစေ
ဒီဝဘမှာပဲ အတိတ်က ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပြေပါစေ
တကယ်လို့ နောင်ဘ၀ ဆိုတာရှိနေသေးရင်
Posted by ZP.LINTAN at 12:26 AM
Posted by ZP.LINTAN at 3:21 AM
Posted by ZP.LINTAN at 3:14 AM
Posted by ZP.LINTAN at 3:10 AM
Posted by ZP.LINTAN at 3:05 AM
Posted by ZP.LINTAN at 3:01 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:55 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:49 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:47 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:17 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:08 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:04 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:02 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:57 AM
08. အခုတော့ပါးစပ်ရာဇ၀င်လေးတစ်ခု ဖြစ်လို့ကျန်ခဲ့ပြီ
10. ပိာုအစ်ကိုကြီးရဲ့ မခင်နှင်းဆီ
Posted by ZP.LINTAN at 1:53 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:43 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:26 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:18 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:17 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:15 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:10 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:50 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:48 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:37 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:31 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:22 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:20 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:15 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:00 AM
Posted by ZP.LINTAN at 11:58 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:51 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:45 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:30 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:28 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:26 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:21 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:15 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:09 PM
ဒီစာကိုရေးတဲ့ခါ ကျနော် ကိုယ့်ဟာကို တော်တော်ညံ့ပါလားလို့ အထင်သေး တယ်။
အဖြစ်က ဒီလိုပါ..ကျနော်က blogg လည်ပြီဆိုရင် သူများလုပ်တာကို ကြည့်တယ်။သဘောကျရင် နည်းပညာရေးတဲ့ လူဆိုရင် အားမနာ ဘားမနာ မေးလေ့ မေးထရှိတယ်။ နည်းပညာမရေးတဲ့ လူကျတော့ မမေးရဲဘူး။
Posted by ZP.LINTAN at 11:34 AM
Posted by ZP.LINTAN at 7:21 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:56 AM
R.ဇာနည် စုံတွဲသီချင်း ဆုန်သင်းပါရ်
Posted by ZP.LINTAN at 1:49 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:45 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:40 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:34 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:13 AM
စုံတွဲသီချင်း ချောစုခင် ဇော်ပိုင်
Posted by ZP.LINTAN at 12:58 AM
စုံတွဲသီချင်း ဟဲလေး ရေဗက္ကာဝင်
Posted by ZP.LINTAN at 12:54 AM
အဖွဲ့ သီချင်း ဇော်ဝင်းထွဋ်
Posted by ZP.LINTAN at 12:49 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:41 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:29 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:19 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:17 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:12 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:10 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:08 AM
Posted by ZP.LINTAN at 11:43 PM
Posted by ZP.LINTAN at 2:40 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:15 AM
Posted by ZP.LINTAN at 2:06 AM
Posted by ZP.LINTAN at 1:48 AM
Posted by ZP.LINTAN at 11:42 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:29 PM
Posted by ZP.LINTAN at 11:14 PM
3.Edit HTML ကိုကလိပါ
4.Expand Widget Template အမှန်ခြစ်ပါ...မမေ့နဲ့ အရေးကြီးတယ်
5.Ctrl+f နဲ့ အောက်က ကုတ်ကိုရှာပါ
အပေါ်ကကုတ်တွေ့ရင် အပေါ်ကကုတ်ရဲ့အောက်မှာ အောက်ကကုတ်ကို ထပ်ထည့်ပေးပါ
ဒီမှာ Height:200px; ကိုကြိုက် သလို ပြောင်းလို့ရတယ်..ကျနော်ကတော့ ၁၀၀ ထားတယ်။
Posted by ZP.LINTAN at 10:24 PM
ဟောဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်လာပြန်ပြီ ဒါကတော့ Dropdown menu လို့ခေါ်ပါတယ်၊တင်ပြီးကြသူတွေလည်းများပါတယ်၊ ဒါပေးမယ်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်code တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူပါဘူး။ ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ code ကအားလုံးရှင်းမယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်၊ အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ၊
KP3Text 1Text 2
Posted by ZP.LINTAN at 10:10 PM
Posted by ZP.LINTAN at 10:47 AM
Hello, Readers, do you still remember my post about makingalabel menu or category in label cloud that I posted here. Now, Kang Rohman would like to giveatutorial about makingalabel in drop down menu. If you have usedalabel cloud, it seems that this tutorial is not suitable for you. This tutorial is suitable for those who still use the original label of blogger.
Browse By Categories3Column template (9) d'tree menu (1) hack (2) blogspot tutorial (41)
Posted by ZP.LINTAN at 3:59 AM
Posted by ZP.LINTAN at 12:34 AM
Windows Start Bar ကို အပေါ ။အောက်။ ဘေးပြောင်ရအာင်
ပထမအသည်းကွဲဇာတ်လမ်း...ဟေမာနေ၀င်း & အိန္ဒြာကျော်ဇင်
အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့...လေးဖြူ & မျိုးကြီး
မနှုတ်ဆက်ချင်ဘူး..ရဲလေး & အိမ့်ချစ်
ဒီကစောင့်နေသူ...မျိုးကြီး & အငဲ
ဝေးဝေးကလွမ်း...မာရဇ္ဇ & လုလု
သစ်ပင်အို ရဲ့ ကမ္ဘာ...ထူးအယ်လင်း
How to create Blogger dropdown archives &Blogg Arc...
R.ဇာနည် & ဆုန်သင်းပါရ်...တစ်နယ်စီခွဲနိုင်မလား
R.ဇာနည် N ဆုန်သင်းပါရ်...မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ပင်လယ်
R.ဇာနည် & ဆုန်သင်းပါရ်...ရှေ့ဆက်ရန်စဉ်းစားပါ
ဒါဟာအချစ်လား...ဇော်ပိုင် & ချောစုခင်
အချစ်ရေပြန်ခဲ့တော့...ခင်ဘုန်း & ရှင်ဖုန်း
ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ..ဟဲလေး & ရေဗက္ကာဝင်း
ဘယ်သူ့မှ...စည်သူလွင် & R,ဇာနည်